Ciyaarta: 1. Tennis 2. Kubadda Koleyga 3. Kubadda Koleyga 4. Kubadda gacanta 5. Hockey Akhri wax dheeraad ah
Maxaa loo ciyaaraa ciyaaraha? Cayaaraha isboortiga wuxuu ka hortagaa oo yareeyaa xanuunka dabadheeraad, xanuunka laabatada, osteoarthritis iyo muruq xanuun. Miisaan dhaca oo korodh ... Akhri wax dheeraad ah
12 Talooyin dabiiciga ah oo loo yaqaan 'gloss of tights': gabdhaha, halkan waa layliyada 12 si aad u nadiifiso sharaftaada oo aad u hesho "dameer"
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 28, 2020 11: 44 No Comments
Gabdhaha badankood iyo ragga qaar waxay jecel yihiin inay sawiraan dabada saxda ah si ay uga dhigaan kuwo kufiican maqaarkan cusub ee "skinny Jeans". Hadaad tahay qof ... Akhri wax dheeraad ah
Rome - Horraanta Madowga / Afrikaanka ee cayaaraha badan: laba sawirro oo loo yaqaan 'terracotta' oo ah feeryahannada Madoow / Afrikaanka "Tartankii isboorti dhaqameedyadii hore ee Griiggu door ayuu ka ciyaaray ciyaarihii Rome" ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 16, 2019 00: 00 No Comments
Sida laga soo xigtay qorayaasha caanka ah, feerka (pugilatus) waxaa loo qaddariyo edbinta ugu adag uguna khatarta badan dhammaan. Intii lagu gudajiray boqortooyada, shaki kuma jiro inaad ka farxiso dad badan ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Admi1waa: Diisambar 6, 2019 15: 31 No Comments